Musiyano uripo pakati pehunyanzvi uye yakakosha ongororo | Ehupfumi Zvemari
Musiyano uripo pakati pehunyanzvi uye yakakosha ongororo
Chero ani ari kuenda kuzoisa mari yavo mumisika yemari achafanirwa kufunga zvimwe zvacho nzira mukudyara. Pamwe zvinoenderana nehunyanzvi hwekuongorora kana, pane zvinopesana, pane yakakosha ongororo. Iwo akasiyana zvachose masisitimu asi izvo zviviri zvinogona kuzadzikiswa. Chero zvazvingaitika, iwo maviri mapoinzi ekutsigira aunayo panguva yekuvhura kana kuvhara nzvimbo mumusika wemasheya. Hazvishamise kuti ivo vanokupa chengetedzo huru mukushanda kubva zvino zvichienda mberi. Izvo zviri kumagumo ezuva zvazviri.
Sezvaungave wakamboona mumakore ako mashoma kana mazhinji ekudyara, pane chimiro chevashandisi vanosarudza ongororo yehunyanzvi pane yakakosha kana zvinopesana. Kufanana nevamiririri vezvemari, ivo vanosarudza imwe kana imwe ongororo system, zvinoenderana nezvavanokoshesa Pamwechete, hapana kuongorora kuri nani kana kwakanyanya kupfuura imwe. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinovakirwa pazvinhu zvakasiyana chaizvo. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti iwe utsanangure kuti zvaunoda ndezvipi kusarudza ongororo yakafanira uye chaiyo.
Kana iwe ukatarisa padhijitari yekudyara mapuratifomu uchaona kuti vazhinji vaongorori vanoshandisa tekinoroji kuongorora kuita yavo fungidziro yemusika wemusika kana zvimwe zvinhu zvemari. Izvi zvinodaro nekuti zviri nyore kwazvo kuenda kune idzi tsananguro uye kwete kune yakakosha dhata yemakambani akanyorwa ayo, kune rimwe divi, anoda gadziriro yakakura mubhizinesi chikamu uye mune ino pfungwa chete nyanzvi dzinogona kuita aya. Akadai akakosha mabasa. Parizvino, chako chikuru chinangwa chinofanirwa kuve icho chine maviri masystem ekuongorora anosanganisira.
1 Tekinoroji yekuongorora: tarisa iyo nguva
2 Batsira kutenga
3 Stock muitiro
4 Kuongorora kwekutanga
5 Target share mitengo
Tekinoroji yekuongorora: tarisa iyo nguva
Yekutanga yemasisitimu ekuongorora, uye haifanire kunge ichinyanya kukosha, ndiyo inonzi tekinoroji. Huye, kuongororwa kwehunyanzvi kunosanganisira kuongorora kuti chii chaicho mamiriro emasheya kana imwe mari yemari. Hazvishamisi kuti iyo yakavakirwa pa musika chiito kudzidza, kunyanya kuburikidza nekushandisa magirafu, kuitira kufanotaura kuti hunhu hwayo huchave hwakaita sei panguva inotevera yezvikamu zvekutengesa. Semhedzisiro yeiyi yakakosha hunhu, hapana mubvunzo kuti ndiyo yakanyanya sisitimu yekuziva kuti chekupinda uye chekubuda chikamu chiri mune chero yemari misika.
Tekinoroji yekuongorora inoshandiswa pamusoro pezvose mukuita kwenguva pfupi uye yakakosha kugadzirisa mitengo. Ose ari mukutenga nekutengesa mashandiro. Uyu mutsauko wakakura kubva pakuongorora kwakakosha. Kuti uwane ruzivo dudzira kufamba uku Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuzviona ivo kuburikidza nemifananidzo. Iko kunoverengeka kwakasiyana manhamba, nhanho nenzvimbo zvinomiririrwa izvo zvichakubatsira iwe kuti uzive zviri kuitika mumatunhu. Kunyanya mukufamba kunoitirwa mazwi mapfupi.
Pasina kupokana, kuongorora kwehunyanzvi rutsigiro rwakakosha kwauri kuti uite maodha ako ekutenga. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinokubatsira iwe kuziva nekuvimbika kukuru inova iyo chikamu chemutengo kwaunofanirwa kupinda mumisika yemari. Iwe une zvivimbiso zvakakura zvekuzadzisa izvi zvinangwa kunyanya kana iwe uchizvienzanisa nedzimwe nzira dzakaomarara dzekuongorora. Kusvika pakuti iwe unogona kusevha maeuro mazhinji mune yega yega mashandiro anoitwa pasi peiyi system yekutanga. Kunyangwe iwe uchifanirawo kuziva kuti harisi iro risingatendeke chirongwa. Kwete zvishoma.
Ehezve, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuve nekumwe kudzidza mune iyi nzira yekuongorora. Kunze kwekumwe kufunga kwakakosha, sezvaunogona kufungidzira kubva pakutanga. Chero zvazviri, iro ruzivo rwakatorwa kubva kuhunyanzvi hwekuongorora runokusiya iwe wakagadzirira kuitira kuti iwe ugone kukudziridza yako kutenga uye kutengesa mabasa kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti ivo vakuudze iwe kuti ndeapi akanakisa maitiro eiyo nguva uye nekudaro iwe unofanirwa kuvhura zvinzvimbo mavari. Kana pane zvinopesana, kana iri yakakodzera nguva yekugadzirisa izvo zvinzvimbo. Ivo zvakare vanokuudza iwe kana chengetedzo yakanyanyisa kutengwa kana kuwedzerwa, semuenzaniso.
Asi kana ongororo yehunyanzvi ichionekwa nechimwe chinhu, iri nesimba rayo rekufungidzira. Ndokunge, inoratidza chii iyo iyo maitiro chaiwo ekuchengetedza, chikamu kana index index. Kana iri inokwidziridzwa, yakakwenenzverwa kana kunyange lateral. Kwete pasina, zvichave zvichikupa iwe ruzivo rwekukosha kwakakosha kuitira kuti iwe ugone kuita sarudzo dzako mumisika yemari. Mune imwe pfungwa kana imwe, sezvo zvine musoro kufunga kubva nenzira iyi yekudyara. Mupfungwa iyi, unenge uchitamba nechimwe chakanakira kana mashandiro akaitwa munguva pfupi yekugara.
Kune rimwe divi, inogona zvakare kuburitsa iyo kusimba kwekufamba. Ndokunge, kana vachizopfupika murefu kana kana, nekusiyana, vane rwendo rwakanyanya kubva panguva idzodzo. Kubva pane ino maonero ekuongorora, zvinogona kutaurwa kuti nyanzvi inyanzvi chaiyo yekutsigira iwe kuti uite zvisarudzo zvako uine hukuru hukuru hwebudiriro. Saka funga zviuru nezviuru zvevashambadzi vadiki nepakati vanosarudza sisitimu iyi kugadzirisa nekugadzirisa mari yavo. Neimwe nzira, chirongwa chekuti iwe uise mari mumusika wemasheya pasina chero pfungwa. Sezvo zvichave zvakaitika kwauri pane kanopfuura kamwe chiitiko.
Kumwe kuongorora kwakasiyana kwazvo ndiko kwakakosha nekuti mune ino chaiyo nyaya ino fungwa iboka rebhizimusi rekambani yakanyorwa. Nekuti zvazviri, kuongorora kwakakosha kuri pamusoro peimwe nzira chaiyo yekuongororwa kwemusika wemasheya, uye izvo zvine chinangwa sarudza kukosha kwechokwadi kwekuchengetedza kana chiito, chinonzi musimboti kukosha. Nedhata dzakadai, senge chikwereti chayo, kukosha kwebhuku kana zvimwe zvakawanda zvinoratidza mamiriro ekambani yakanyorwa pamisika yemari. Nekudaro, iko kwakaomesesa kuongorora sekuzoona kwaunoita nguva chaidzo.
Nekuti ino sisitimu inoshandiswa muhombodo yakawanda mune izvo zviri izvo mhedzisiro yebhizinesi uye kwete mumaitiro ezviito zvavo. Izvo hazvina chekuita nemumwe, kunyangwe hazvo iwo ari data iwe aunogona kuzadza zvakakwana kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti ivo vachazopa kuchengetedzeka kwakawanda mune yega yega mashandiro aunoita. Chero zvazviri, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi ongororo system inoda ruzivo rwakawanda kupfuura rwehunyanzvi. Havasi vese varairidzi vanozove munzvimbo yakakwana yekududzira iyo data yakapihwa neiyi yakazara kuongorora.
Target share mitengo
Kusiyana nehunyanzvi hwekuongorora, mune ino kesi zvinonyanya kubatsira pakuita pasina chero mhando yekukura. Iko kwaunogona kuchengeta zviwanikwa zvako kusvika kumatemu aunoda panguva imwe neimwe. Kubva pane ino maonero, haugone kutadza nekutaura kwakakosha kuongorora yakazara zvakakwana kupfuura tekinoroji. Kunyangwe chinhu chakaomesesa ndechekuti unogona kuchidudzira nemazvo. Hazvishamise kuti, rimwe rematambudziko makuru anosanganisira kushandiswa kwaro nderekuti unogona kukanganisa uye nokudaro uite mamwe mashandiro pamusika wemasheya unogona kukuvadza zvakanyanya zvaunofarira kana zvehunyanzvi. Iyi ndiyo imwe yenjodzi hombe dzaungave nadzo nekushandisa ino yakasarudzika system.
Kwete pasina, haugone kukanganwa kuti iyi ndiyo nzira iyo pakupedzisira inoedza kuverenga kukosha chaiko kwekuchengeteka. kuburikidza nekuyera sheet sheet uye anozvifananidza nemutengo wemusika. Saka kuti nenzira iyi, uri mumamiriro akakwana ekuratidza kana mutengo wemamwe masheya wakachipa kana kudhura. Nekuti kuburikidza nesisitimu ino, vamiririri vezvemari vanopa ruzivo rwakakosha semutengo wakatarwa wemaseya uye unovandudzwa nguva nenguva. Chero zvazvingaitika, icho chidimbu cheruzivo icho chinokubatsira iwe kuti uzive kuti ndeapi matanho emakambani zvikamu.
Sezvawaona, idzi inzira dzakasiyana dzinogona kushandiswa zvichienderana neprofile raunopa. Asi zvakare zvine chekuita neruzivo iwe unofanirwa kududzira imwe yeaya maviri ongororo. Hazvishamise kuti icho chinhu icho mukana wevashambadzi vadiki nepakati vanogona kusiyana. Nekuti hazvishamise kuti vamwe vashandisi vanosarudza imwe nzira uye vamwe yekuzorora. Chekupedzisira, chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho panguva ino, zvese ongororo inzira dzekuita kuti kuchengetedza kubatsire pamwe nezvivimbiso zvikuru zvekubudirira. Kunze kwekumwe kufunga mukududzirwa kwemasheya mumisika yemasheya uye ndicho chimwe chezvinangwa zvikuru zvekudyara mumusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Musiyano uripo pakati pehunyanzvi uye yakakosha ongororo
Adriel rodriguez akadaro
Ini ndakanzwisisa kuti yakakosha ongororo ndiyo yakasarudzika, iwe unobata iro ruzivo kwazvo, ndinokutendai nekujekesa kusahadzika, ikozvino ini ndine ruzivo rwakawanda rwezvose, isu tinofanirwa kutora kuraira kubva kune nyanzvi. Parizvino, isu zvakare tine wechidiki mutengesi anonzi Fernando Martínez Gómez-Tejedor, uyo akaratidzira mune rake basa nzira dzakanaka kwazvo mubhizinesi renyika uye nehunhu hwakakura semunhu.
Pindura kuna Adriel Rodriguez
Mabhuku akanakisa emari yekutsinhana
Tengesa izvozvi kuti utangezve kudyara mushure mezororo